बोरा स्टुडियो : तितेपातीको पातबाट कपडामा रङ
- प्रबिना पाैडेल | काठमाडाैं, चैत २०
‘तितेपाती’ झार कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएको छ ? गरेको भए, औषधिकाे रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुभयो होला । तर, कपडामा रङ भर्न पनि तितेपाती प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको रङ प्रयोग गरेरै फेसन डिजाइनर मीना गुरुङले कपडा डिजाइन गरिरहेकी छिन् । यद्यपि, सुरुमा झारपातबाट रङ निकालेर कपडामा प्रयोग हुन्छ भन्ने सुनेपछि उनलाई पनि अचम्म लागेकाे थियाे ।
तर, विस्तारै तितेपातीको महत्त्व बुझेपछि उनले यसैलाई व्यवसाय बनाउने अठाेट लिइन् र सुरु गरिन् फेसन डिजाइनिङको यात्रा । मीना हाल ‘बोरा स्टुडियो’ नामक फेसन डिजाइनिङ कम्पनी सञ्चालन गर्छिन् । तर, उनी बोरा स्टुडियोलाई कम्पनी भनेर मात्र चिनाउन चाहँदिनन् ।
मीनाको डिजाइनिङमा प्राकृतिक वस्तुकाे मात्रै प्रयोग हुन्छ । पातबाट प्रिन्टिङ गर्ने, झारपात र रुखको जरा आदिबाट रङ निकाल्ने जस्ता काम उनी गर्छिन् । उनी ‘सिन्थेटिक’ अर्थात् प्लास्टिक मिसाइएको कपडा पनि विरलै प्रयोग गर्छिन् । र, मीनाको दीर्घकालीन सोच पनि बोरा स्टुडियोमार्फत प्राकृतिक कच्चा पदार्थको प्रयोग फैलाउने हो ।
धिमाल समुदायलाई सिकाउँदै मीना ।
उनले कम्पनी खोलेर औपचारिक काम सुरु गरेको पाँच वर्ष भयो । तर, फेसन डिजाइनिङको उनको अनुभव आयरल्यान्डमा फेसन डिजाइनिङ पढ्दै गर्दा सुरु भएको हो । उनी आफ्नो कपडामा आफैँ रङ भर्थिन् । गुरुङ तीन वर्ष मात्र आयरल्यान्ड बसिन् । तर, छोटो समयमा धेरै सीप र काम गर्ने ऊर्जा बटुलेर उनी नेपाल फर्किइन् ।
३० वर्षीया मीनाले सुरुमा नेपालमा नै पढ्ने र काम गर्ने सोच बनाएकी थिइन् । चित्रकला क्षेत्रमा रुचि राख्ने उनी ‘ए–लेभल’को पढाइ सकेर कलासम्बन्धी थप अध्ययन गर्ने विचार बुन्दै थिइन् । तर, ‘चित्र कोरेर जीवन चल्छ ?’ जस्ता प्रश्नहरू आफन्तबाट आइरहन्थ्ये । उनी हतोत्साहित पनि हुन्थिन् ।
त्यसैले उनले चित्रकला नै नभए पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न सकिने विषय रोजिन् । मीनाले विदेश गएर फेसन डिजाइनिङ पढ्ने निर्णय लिइन् । विदेश जान तयार भए पनि ‘कहाँ जाने भन्ने निर्णय लिन सहज थिएन । ‘एउटा फिल्म हेरेकी थिएँ, त्यहाँ आयरल्यान्डको निकै सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू देखाइएको थियो । मलाइ त्यो वास्तवमै हेर्न मन लाग्यो । त्यहाँ पुग्नुको खास कारण यही हो । पछि त्यो देशको बारे खोजेँ, पढेँ अनि थाहा पाएँ प्राकृतिक विविधता प्रशस्त पाइने रहेछ । पढ्नलाई राम्रो र सस्तो पनि थियो त्यसैले आयरल्यान्ड गएँ’, उनले भनिन् ।
मीना तनहुँको आबुखैरेनीमा जन्मिएकी हुन् । उनलाई प्राकृतिक र अर्ग्यानिक कुराहरूप्रति पहिलेबाट नै आकर्षण थियो । त्यस्तै कुराले डोर्‍याएकाेले हाेला उनी सन् २०१२ मा आयरल्यान्ड पुगिन् । गुरुङले आयरल्यान्डको ग्रफिट कलेजमा पढ्दै सुपरमार्केटमा पार्टटाइम जागिर सुरु गरिन् । संयोगको कुरा के भने, उनको जागिर पनि प्राकृतिक कच्चा पदार्थ प्रयोग भएका कस्मेटिक सामानहरू नै बेच्ने थियो । व्यापार के–कसरी गर्ने भन्नेबारे सिक्ने मौका उनले त्यही दौरानमा पाइन् ।
विदेशमा पढाइ सक्ने, केही वर्ष पढाइसम्बन्धी नै काम गर्ने र नेपाल फर्कने उनकाे सोच थियो ।
जब सन् २०१५ मा फेसन डिजाइनिङको ३ वर्षे कोर्स सकियो, उनी काम खोज्न लागिपरिन् । तर, आयरल्यान्डमा त्यही समय आर्थिक संकट आइपर्‍याे । उनलाई भनेजस्तो जागिर पाउन कठिन भयाे । शहरमा टिक्न पनि गाह्रो हुने स्थिति निम्तियो ।
प्रिन्ट गर्न ठिक्क पारेको झारपात ।
‘रेस्टुरेन्टहरूमा जागिर त पाइन्थ्यो, तर पढाइ सकेर पनि आफूलाई मन लागेको काम गर्न पाइनँ’, गुरुङले आयरल्यान्डको संकटकालको घटना सम्झिँदै भनिन्, ‘आखिर फर्किने सोच नै छ, किन अर्को वर्षसम्म कुर्ने भन्ने लाग्यो । र, २०१५ को अन्तिममा नेपाल फर्किएँ ।’
फर्किएर आफूले पढेकाे विषयमै केही गर्ने अठाेट उनकाे थियाे । काठमाडौं फर्किएपछि एक जना दाइको कम्पनीमा मीनाले एक वर्ष इन्टर्न गरिन् । कलामा पोख्त ती दाइको कामबाट उनी प्रभावित भइन् । प्रिन्ट गर्ने, डिजाइन गर्ने देखि व्यापारको तरिका पनि दाइसँगै सिकिन् ।
नेपालमै कहाँबाट समान ल्याउने, कहाँ बेच्नेदेखि विदेशी ग्राहकहरूसँग के–कसरी व्यापार गर्ने भन्ने कुराहरू जान्ने अवसर मीनाले पाइन् । र, उनलाई आफ्नै काम सुरु गर्ने विश्वास पलाउँदै पनि गयो ।
छुट्टै कम्पनी नबनाए पनि उनले त्यही समय आफ्नो नयाँ नामबाट व्यापार भने गरिन् । उनले आफूले बनाएको ब्याग पहिलो पटक २०१६ मा बोरा स्टुडियोको नामबाट जापानमा बेचेकी थिइन् । त्यसपछि उनले बोरा नामले हालसम्म काम गर्दैछिन् ।
बोरा स्टुडियो नाम सुन्दा हरकोहीलाई अचम्म लाग्छ । किन बोरा स्टुडियो नै नाम रह्यो त ? चामल, चिउराजस्ता खाद्यान्न ल्याउने बोराजस्तै धेरै पटक अनि धेरै तरिकाले प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने सोच्दा सोच्दै कम्पनीको नाम बोरा राखेकाे मीनाले बताइन् ।
उनले आफ्नै व्यापार सुरु गर्नुको अर्को मुख्य कारण हाे सन् २०१२ मा बंगलादेशको ‘राना प्लाजा’को ठूलो संरचना भत्किनु । यो प्लाजालाई फेसन डिजाइनदेखि धेरै मात्राको कपडा बनाउने सबैभन्दा ठूलो भवन मानिन्थ्यो ।
त्यस घटनापछि फेसन डिजाइनिङबारे कलेज कोर्समा ‘केस स्टडी’ गर्नुपर्ने भयो । त्यस समयमा थोरै पैसामा कामदारहरूलाई धेरै काम लगाइने रहेछ भन्ने कुरा बाहिरियो । ‘ठूला ब्राण्डका कपडाहरू धेरै पैसामा बेचिन्थ्यो, तर कामदारलाई पैसा निकै कम दिइने रहेछ । मिहिनेत अनुसारको पैसा पाइनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो', उनले भनिन्, 'त्यसबेलाको त्यो केस स्टडीले मलाइ पनि सचेत हुन सिकायो ।'
२०१७ मा दुई जना लगानीकर्ता उनको प्राकृतिक कच्चा पदार्थको आइडियामा लगानी गर्न तयार भएर औपचारिक रूपमा बोरा स्टुडियो सुरु भयो । सुरुमा झम्सिखेलकाे सानो ठाउँमा टिसर्ट, ब्याग, पछ्यौराजस्ता कपडा मात्रै बन्थ्यो । तर कपडामा ’मेड फ्रम अर्ग्यानिक कटन’ भनेर राखिन्थ्यो । अर्थात्, बोरा स्टुडियोमा कीटनाशक प्रयोग नगरिएको कपास मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्तो कपासको प्रयोग गरेर कपडा बनाउँदा शरीरलाई असर नगर्ने र फलाउँदा जमिनलाई पनि असर नगर्ने कुरा सचेत गराउने ध्येय मीनाको थियो ।
मीनाले व्यवसाय अघि बढाउनलाई मात्र बोरामा काम गर्थिनन् । केही समय नाफामा ध्यान नदिएर आफ्नो प्राकृतिक र अर्ग्यानिक कच्चा पदार्थको अभियानलाई धेरै मान्छेसम्म पुर्‍याउने उनकाे सोच थियो । कम्पनी घाटामा थिएन, तर सोचेको नाफा भएन भनेर लगानी गर्ने अन्य दुई साथीले बोरा स्टुडियो छाडे ।
यद्यपि मीनाको हिम्मत बलियो थियो । उनी निराश भइनन् । गैरीधारामा नयाँ ठाउँ र तीन जना टेलरहरूलाई लिएर अझ धेरै हौसला लिएर उनकाे काम गरिन् । त्यसपछि उनकाे चर्चा विदेशसम्म फैलियो । जापान, डेनमार्क जस्ता देशमा पनि उनकाे उत्पादन निर्यात हुन थाल्याे ।
पात पतिंगर, घाँस, रुखको जराबाट हरेक पटक नयाँ डिजाइन पाउने हुनाले पनि उनलाई हरेक पटक खुसी लाग्छ । उनी हरेक पटक नयाँ काम गरेको जस्तो अनुभूति लिने गरेकाे बताउँछिन् । मीनाका अनुसार ग्राहकहरू पनि उनको कामबाट खुसी छन् ।
‘बाहिरको लुगा लाउँदा कोही न कोहीसँग मिलिहाल्छ, डिजाइन पनि उस्तैउस्तै हुन्छ । तर, तपाईंको डिजाइन लगाउँदा सधैँ फरक हुन्छ । मेरै लागि बनाएजस्तो लाग्छ', एक ग्राहकले सुनाएको अनुभव मीनाले बाँडिन् । प्राय: विदेशी ग्राहकहरूले अर्ग्यानिक कुराहरू चिन्ने उनको अनुभव छ ।
‘नेपालमा त धेरै जनाले, लुगामा पनि प्लास्टिक मिसाएको हुन्छ र पनि भन्नुहुन्छ । कपडाको क्वालिटी बुझ्ने विरलै भेटिन्छन् । यसरी बनाएको लुगा महँगो पनि हुने भएर ठगेको पनि भन्छन् । विदेशमा त यस्तो हुन्न खै’, उनले भनिन् ।
अब उनको योजना छिट्टै काठमाडौं बाहिर अफिस खोल्ने छ । काठमाडौं बाहिर खुल्ला ठाउँमा वर्कशप, ट्रेनिङहरू गर्न मिल्ने ठाउँकाे खाेजी गरिरहेकाे उनले बताइन् । उनलाई आफ्नो जीवनभरि यस्तै नयाँ काम गरिराख्न मन छ । अरुले बनाएको जस्तो लाउनलाई मात्रै कपडा बनाउन रहर छैन ।
आयरल्यान्डको पढाइले आफूलाई याे क्षेत्रमा काम गर्न निकै सहज भएकाे उनी बताउँछिन् । 'आयरल्यान्ड नगएको भए अन्य फेसन डिजाइनरको जस्तै लेहेङ्गा, साडी बनाएर बसिन्थ्याे होला । विदेशकाे व्यावहारिक पढाइले ‘आउट अफ बक्स’ सोच्न सिकायो', उनले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २०, २०७८, ०७:०५:००